China Spout pouches ifektri abakhiqizi | Hong Bang
Inzuzo yezikhwama ze-Spout
Isikhwama se-spout siyindlela entsha yokupakisha imodi eklanyelwe ngokukhethekile imikhiqizo esekwe kuketshezi Isizathu sokwamukelwa kwalezi zikhukhu ezifakwe ngumklamo waso osebenziseka kalula olungele ukugcina uketshezi, ikhekhe noma izinto eziningi ezikhululekile. Ngaphandle kwalokho, uma kuqhathaniswa namabhodlela ejwayelekile e-PET noma engilazi, izikhwama ezifakiwe zilula ukuthuthwa futhi zilungele amashalofu okuthengisa.Izinto ezisetshenziselwa ikakhulukazi imikhiqizo efana nokuwasha isikrini sesiteshi sikaphethiloli, i-baby jelly, ukudla oketshezi, iziphuzo ezibandayo nezinto zokugeza njll.
Izikhwama ezinesipeliti ziyaphinda zivaleke futhi zikhiqizwe nge-weld spout kanye ne-cap. Lezi zinhlayiya zingaklanyelwa ukulawulwa kokuchitheka, ukusebenziseka kalula nokuphepha futhi ngenxa yalokho zilungele uhla lwamanzi lwemikhiqizo efana neziphuzo, amasoso noma izinto zokuhlanza. Usayizi nefomu kungenziwa egcizelele njengoba ngamunye amaklayenti isidingo kanye nemfuneko.
IPack Smart ibuye inikeze izikhwama ezifakiwe ezifaka okuhlanganisiwe nokuvalwa ngokuya ngemininingwane yemikhiqizo eminingi.
Nakhu Ukupakisha kwe-HONGBANG. Sinikeza izixazululo ezahlukahlukene zokufaka izikhwama zokudla ngezidingo ezihlukile nokusetshenziswa.Usitshele imfuneko sakho sizohlangabezana nazo zonke izinhlobo zezidingo zakho. Asenzi imikhiqizo futhi sizama ukukuyisa kuyo; silalela izidingo zakho nobunjiniyela obusha obuzoxazulula izinselelo zakho zokupakisha.
Ukuphrinta kwe-Vivi, okucwebezelayo noma kwe-matte kuqediwe
Ububanzi beSpout neCaps
Sukuma noma uyisicaba
Izakhiwo Ezivamile (Izinto) Zezikhwama Ezikhutshiwe
Ungqimba Middle: I-Leakproof, ne-Acts njengesithiyo sokuvikela ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwesikhwama kugcinwa kuphephile futhi kukusha.
Imikhiqizo ye-Pasty ne-Liquid
Imikhiqizo Yasekhaya Nengadi
Imikhiqizo Yezempilo Nobuhle
Ukupakisha kwezezimboni nokunye
Ukwenza ngokwezifiso Masithole Ukuxhumana
Langaphambilini Isikhwama sezinsiza zomakhalekhukhwini
Isikhwama Sokuma Ngokwezifiso
Izimo Stand Up Isikhwama
Isikhwama sePlastiki Esimile
Ukupakisha imaski ebusweni kwezikhwama zepulasitiki
Isikhwama sezinsiza zomakhalekhukhwini
Ukudla Umshini Seal Roll 10, X 50'- 2 ...